Ma i tusi kartaa dhowr siyaabood oo macquul ah si ay u dhamaystiraan Amazon iyo guuleystaan?
Aynu wajahno - Ganacsade kasta oo firfircoon oo iibiya Amazon waxaa ku lug leh tartan adag oo adag. Iyo habka kaliya ee ku sifoobi karnaa suuqa weyn ee suuqa ku yaala waxay ku adkaatay Suuqa Suuqa iyo qabashada Amazon dhamaystiran oo dhamaystiran ee liiska alaabtaada. Haddii kale, qaybta libaax ee alaab iibiyeyaashu waxay mar walba raadinayaan oo kaliya dalabyada degdega ah iyo kuwa raqiis ah ma doonayaan in ay waqti badan ku qaataan wakhti badan oo la yaab leh isla markaana go'aan ka gaaraya heshiiska ay ku kala dooranayaan badeecad aad u ballaadhan. Oo halkan waa marka Amazon ku fiicnaado yimaado ciyaaro! Hoos waxaan kugusoo bandhigi doonaa dhowr waxyaabood oo wax ku ool ah oo lagu taageerayo tilmaamo akhbaar ah oo aad ku doonayso in aad kudhaqaajiso Amazon sida pro.
in aad leedahay miisaan aad u badan oo Amazon ah ayaa noqon kara xitaa awood badan haddii aad xoogga saarto inaad ku geliso cinwaankaaga sheygaaga. Isla mar ahaantaana, tixgelinta in macaamiisha intooda badani ay ogaadaan waxa ay u baahan yihiin - ka caawinaya inay tilmaamaan alaabtaada adigoo isticmaalaya weedho dheer raadin ah waa fikrad aad u fiican, sax? Iyo inaad naftaada siiso fursadaha ugu fiican ee rikoodhada iyo beddelidda macaamiisha aan horumarin ee iibsadaha dhabta ah waxaan kugula talin lahaa isticmaalka ereyada saxda ah ee saxda ah (tusaale ahaan, kuwaas oo ay ku jiraan waxyaabo sida midab ama alaab ah waxay kaa caawin kartaa inaad si weyn kor ugu qaaddo celceliska celceliskaaga), marna ka waaban ku qor magacyada calaamadda sheygaaga sheygaaga (kaliya si aad u wanaagsantahay si aad u raadisid raadin calaamado ah oo la bartilmaameedsan yahay), oo ha iloobin inaad heshid taageerid gaar ah oo loo yaqaan 'Amazon keyword optimization tool, sida Kormeeraha Keyword, Ereyada Ganacsi, Unicorn Smasher, ama AMZ Tracker.
Hadafka Xuquuqda Dib u Eegista Macaamilka
Maalmahan, haysashada caddayn bulsho oo wanaagsan ayaa noqonaya mid sii kordheysa oo muhiim u ah farsamada kasta ee shabakadda internetka, marka laga reebo naqshadaynta Amazon . Waana wax yaab leh - qanacsanaanta macaamilka ayaa ku taageeray faallooyin wanagsan iyo dib u eegis badanaa waxay dadka ku dhiiri geliyaan inay ku biiraan heshiiska. Kaliya u dheellitirka saxda ah ee u dhexeeya bixinta dhiirigelin iyo u dhaqdhaqaaq si aad u adag. Xusuusnow in dib u eegista macaamiisha ay dhab ahaantii tahay mid aad u muhiim ah, gaar ahaan marka ay timaado go'aanka ugu dambeeya ee lagu iibsado. Waxaan loola jeedaa in sumcad xumo leh dib-u-eegis macaamil macquul ah oo soo noqnoqota oo macquul ah laga yaabo inay sidoo kale ka celiso saamiyada libaaxyada ee macaamiishaada suurogal ah oo ku habboon dhinaca jihada. Si looga hortago dhacdooyinka nasiib-darrada ah, waxaan ku talinaynaa isticmaalka Genius Genius Online lacag la'aan ah. Habkaasi, waxaad ku wanaajin kartaa waqtiga dhabta ah si aad mar walba lagula socodsiiyo dib-u-eegis macaamil macquul ah oo u baahan wax jawaab degdeg ah. Isla markiiba, muujinta rabitaankaaga iyo inaad wax ka qabatid dhacdooyinka xun xun ka hor inta aysan waxyeello u geysan ganacsigaada internetka oo dhan had iyo jeer waa go'aan fiican oo la sameeyay, sax ah? Ka dib markaad taabatid, xiriirka firfircoon ee dhinaca iibsadaha ayaa si toos ah u siin doona inta badan martidaada qayb maskax wanaagsan - iibiyuhu wuxuu qaataa daryeel gaar ah oo mid kasta iyo macaamil kasta oo iibsanaya halkaas Source .